थर्टी इयर्स अफ सलिच्युड
२०७५ श्रावण २४ बिहीबार १३:४२:००
तीन दशकदेखि बौद्ध, महाँकालस्थित ‘हर्मिताज’ को एउटा कोठाको बत्ती साँझ नपर्दै निभ्थ्यो र मध्यरातमा बल्थ्यो । झट्ट सुन्दा कुनै मिथकजस्तो लाग्ने पात्र मनुजबाबु मिश्र साँझ नपर्दै सुत्थे र मध्यराततिरै उठेर रङहरुसँग खेल्थे । गत बुधबार (साउन २३ गते) पनि उनी सदाझैँ राति २ बजे उठे र रङहरुको बट्टा समाउन खोजे, तर सकेनन् । उनको क्यान्भास ठडिएन । कलम चलेन, रङका बट्टाहरु खुलेनन्, कोठाको बत्ती पनि बलेन ।
नजिकबाट नचिन्ने र नबुझ्नेका निम्ति उनी सधैँ एक सर्रियालिस्टिक पात्र बनिरहे, तिनका निम्ति उनको जीवन एक ‘पहेली’जस्तै रह्यो । उनको जीवनशैली ‘म्याजिकल रियालिज्म’ झैँ लागिरह्यो । म्याजिकल रियालिज्मलाई साहित्यका माध्यम (उपन्यास– वन हन्ड्रेड इयर्स अफ सोलिच्युड) बाट गाब्रियल गार्सिया मार्खेजले कल्पनाको उच्चतम रुप दिए । चित्रकारिताका माध्यमबाट देश–विदेशमा नाम कमाएका मिश्रले भने आफ्नो जीवनका अन्तिम तीन दशक नै ‘सलिच्युड’ बिताए । उनका चित्रलाई कला समीक्षकहरुले म्याजिकल रियालिज्म, दादाइज्म, सर्रियालिज्म, पोस्टमोडर्निज्मजस्ता अनेक ‘यथार्थभन्दा टाढा’का सिद्धान्तका आँखाले हेरे । तर, उनको जीवन भने सरलभन्दा पनि अझ सरल बित्यो ।
उनले जीवनमा सम्भवतः आफ्नै अनुहारलाई बिगारेर धेरै चित्र बनाए । सिङ उम्रेको, नाक बांगेको, दाह्रा निस्केको, हेर्दै दिक्क लाग्ने ख्याउटे आदि । आफू र आफ्ना रचनाको उनले कहिल्यै तारिफ गरेनन् । गत वर्ष २०७४ को जनैपूर्णिमाका दिन आफैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै उनले आफ्नै क्यारिकेचर क्यान्भासमा उतारे र त्यसको शीर्षक राखे– ‘८२औँ जन्मदिने स्केच’ । उक्त चित्रमा पनि उनले आफूलाई अनौठो प्रस्तुत गरेका छन्, विरुप पारेका छन् । किन उनी आफूलाई विरुप प्रस्तुत गर्थे ? किन उनी आफ्ना सिर्जनालाई फोहोर वस्तु मान्थे ? यी र यस्ता प्रश्नहरु थुप्रै वार्ताकार, शुभेच्छुक तथा पाठकले उनीसँग गरेको हुनुपर्छ । सबैले पाउने जवाफको आशय पनि उस्तै हुनुपर्छ– यो संसार यति विरुप छ, म कसरी सुन्दर चित्र बनाउन सक्छु ? संसार जस्तो छ, मैले बनाउने चित्र पनि त्यस्तै हुने त हो । ‘मैले जे खाएको छु, निस्कने पनि त्यही नै त हो,’ उनी भन्ने गर्थे ।
मिश्र समाजका बेथिति, विरुपता, मान्छेका भद्दापनजस्ता कुरासँग तीव्र विमति राख्थे । उनलाई मुलुकबाट राजसंस्था हटेको कुरामा चित्त बुझिरहेको थिएन । बहुदललाई उनी ‘अभिशाप’ मान्थे । जब देशमा बहुदल (२०४६ सालको परिवर्तन) आयो तब उनले एउटा आत्मघाती निर्णय लिए । त्यो निर्णयले उनलाई विवादित पनि बनायो । जबसम्म देशबाट बहुदल नासिएर राजसंस्था बहाल हुँदैन, तबसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने उनले हठ गरे । कुनै सार्वजनिक समारोह, सुन्दर स्थान वा सहरबजारमा उनलाई देखिनु ठूलै ‘आश्चर्य’ थियो । आफैले रोजेको बाटोले उनलाई गुफावासी बनाइदियो, एकान्तप्रेमी बनाइदियो । यसबीचमा उनलाई थुप्रै संघ–संस्थाहरुले सम्मान तथा पुरस्कृत पनि गरे । तर, उनी पुरस्कार थाप्न कहिल्यै गएनन् । उनले गुफामै बसेर चित्रकारिता र निबन्धकारितालाई अघि बढाइरहे । मिश्रका निबन्ध चित्रजस्ता र चित्रचाहिँ कथाजस्ता लाग्छन् । हरेक चित्रले एउटा समयको बेजोड कथा बोकेको । समसायिक विडम्बनालाई रङहरुका माध्यमबाट प्रकट गर्ने उनको कला अदभूत लाग्छन् । उनका अधिकांश चित्र व्यंग्यले भरिपूर्ण । समाजमा व्याप्त पाखण्डलाई चित्रमार्फत् झापड हान्न मिश्रजति सिपालु सायदै अन्य नेपाली कलाकार भेटिएलान् !
कलम र कुची दुवैमा अब्बल मिश्रको तीन दशक एउटा सुरुङजस्तो कोठामा बित्यो । पछिल्ला केही वर्ष नयाँ घरमा बसे पनि उनी पुरानै गुफामा बढी रमाएको महसुस हुन्थ्यो । हरेक सुन्दर वस्तु र संसारले प्रशंसा गरेका कुराको पनि अँध्यारो पाटो हुन्छ भन्ने सोच मिश्रमा जरो गाडेर बसेको थियो । त्यही कारण उनी विश्वप्रसिद्ध मोनालिसाको सुन्दर चित्रलाई पनि कहिले विरुप पारेर त कहिले मौलिक नेपाली रुपमा उतार्थे । ‘राम्रो म’ भनेर नथाक्ने अहिलेको दुनियाँमा ‘नराम्रो म’ भन्ने मिश्र एउटा बेग्लै मानिस बनेर बाँचे ।
उनी चित्ताकर्षक चित्र कोर्थे र राम्रा निबन्ध लेख्थे भन्ने कुरा उनीबारे चासो राख्ने जोकोहीलाई थाहा छ । तर, उनी विश्वकला इतिहासका व्याख्याता पनि थिए भन्ने कुरो कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ । संसारप्रसिद्ध कुनै पनि कलाकारको नाम लिँदासाथ उनी उक्त कलाकारको इतिवृत्त बताउन थालिहाल्थे ।
२०३९ सालमा प्रकाशित उनले लेखेको पुस्तक ‘विश्वकलाको इतिहास’ यसको साक्षी छ । उनलाई भेट्ने अनुज तथा युवा लेखक, कलाकारले अनुभव गरेको हुनुपर्छ– नयाँपुस्ताप्रति उनको विश्वास, स्नेह र प्रेरणा । हर्मिताजमा कतिपटक मैले उनलाई भेटेँ, म भन्न सक्दिनँ । तर, जिन्दगीमा सबैभन्दा धेरै पटक भेटेका लेखक–कलाकारमध्ये उनी पहिलो नम्बरमा पर्छन् । उनीसँगको हरेक भेट मेरा निम्ति एउटा प्रोत्साहन, प्रेम र स्नेहले ओतप्रोत रहन्थ्यो । मिश्रको निधनबाट नयाँ अर्थात् अनुज पुस्ताले एउटा अभिभावक गुमाएको छ भने देशले एउटा कुशल कलाकार–निबन्धकार ।